Naya Post Nepal | पलको असली मुकुण्डो उ’घ्रिएसँगै बिना उजुरी प’क्राउ गर्न सक्छ प्रहरीले, यस्तो रहेछ हरेक नालिबेली
पलको असली मुकुण्डो उ’घ्रिएसँगै बिना उजुरी प’क्राउ गर्न सक्छ प्रहरीले, यस्तो रहेछ हरेक नालिबेली
काठमाडौं – कलाकारलाई देशका गहना भनिन्छ । गहना भन्ने शब्द आफैंमा यस्तो शब्द हो कि यसको अर्थ नै अ’मुल्य छ । गहना स’फा हुनु पर्छ अनि मात्र त्यसको महत्व रहन्छ तर रं’ग’मञ्चीय कलाकारिता क्षेत्रलाई नै आ’लो’च’कहरुले भने जस्तो नौ’टं’कीबाजहरुको क्षेत्रका रुपमा नै प्रमाणित गर्न खोजियो भने त्यसले समग्र गहनाको अ’स्तित्व नै नामेट बनाइ दिन्छ ।
कलाकारिता मनोरञ्जन मात्र होइन । सामाजिक सचेतनाको निश्चल ऐना पनि हो । ऐना सफा भएमात्र आफ्नो अनुहार सफा देखिने हो । ऐना फोहोर गरेर अनुहार घो’ट्नुको अर्थ रहदैन । कलाकारिता क्षेत्रका स्व’च्छता स’म्बन्धमा अनेकन उदाहरण दिन सकिएला तर यसैलाई माध्यम बनाएर आफ्नो क्षणिक मस्तीको महत्वाकांक्षामा क’लाकार बनेकाहरुले यसलाई अपवित्र बनाइ रहेका छन् । यसैको उदाहरण बनेको छ पछिल्लो समय वि’वा’दमा आएको मोडल पूर्ण विक्रम उर्फ पल शाह र किशोरी गायिका समिक्षा अधिकारी प्रकरण ।
करीब एक वर्षदेखि गाईं गुईं सुनिदै आएको यो प्रकरण हाल डिजिटल बजारमा छ्याप छ्याप्ती सुन्न र हेर्न पाइएको छ । एउटा युवकले एकै पटकमा धेरै युवतीलाई विवाहको आस्वासन दिदै शोषण गर्ने मात्र होइन कानूनले बन्देज गरेकी किशोरीसम्म छोड्दैन रहेछ भन्ने एउटा उदाह’रण डिजिटल प्लेटफर्महरुमा सार्वजनिक भएको अडियोले दिएको छ ।
गायिका अधिकारीसँगको सम्बन्धलाई जोडेर पलका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा आएका भएता पनि कतिपयले चर्चामा रहेका व्यक्तिका बारेमा अनावश्यक समाचार बनाएर बजारमा बिक्न खोजेको आरोप समेत लागेको थियो । पलका बारेमा भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेर चर्चामा आउन खोजेको आरोप सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थामाथि लगाइएको थियो । तर प्रमाणका रुपमा अडियोहरु प्रसारण नै भएपछि भने पल र समिक्षाको बारेमा चलेको चर्चाको पुष्टि मात्र गरेको छैन, पलले कलाकारिता क्षेत्रबाट कमाएको लोकप्रियताको दुरुपयोग गरेर एकपछि अर्की युवतीलाई भ्रमित आश्वासन दिदै उनीहरुको सपनामाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको समेत सत्यता ओकलेको छ ।
चर्चामा रहेका व्यक्तिले गरेका हरेक गल्ती र अपराध ढाकछोप गर्दै त्यस्ता व्यक्तिका कथित फ्यानहरुले कतिसम्म देवत्व गर्दा रहेछन् भन्ने यथार्थता पनि सार्वजनिक भएको अडियोले प्रमाणित गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानूनले अपराध गर्ने छुट कसैलाई पनि दिएको छैन र जिम्मेवार निकायमा बसेका अर्थात सेलिब्रटीले त झन् कानूनको उल्लंघन गर्नै हुँदैन भन्ने आम मान्यता छ । तर पलले भने यस्ता मान्यताको समेत खिल्ली उडाएका छन् ।
नेपाली दर्शकहरुले दिएको अपार मायाबाट मात्तिदै बजारमा २ हजार बढी भिडियो गर्ने नायक हुँ, मेरो अनुहार हुनासाथ जस्तोसुकै गीतको भिडियो पनि चल्छ भन्ने घमण्ड पालेका उनले अभिनय गरेका पछिल्लो समयका अधिकांश भिडियोमा दर्शक छैनन् । अझ कतिपय म्युजिक भिडियो छायाँकन गर्न जाँदा त्यही गीतको बारेमा व्लक भन्दै भिडियो बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा पहिले नै लिक गर्दिने उनको बानीले धेरै निर्माताहरुलाई डुबाएको गुनासो समेत सु्न्ने गरिएको छ ।
नेपाली श्रव्यदृष्यका दर्शकहरुले शाहलाई नायकका रुपमा समेत चिन्छन् । तर नायक भनेको के हो ? नायकत्व केलाई भनिन्छ ? नायकमा हुनु पर्ने गुणहरु के–के हुन् ? नायक भनेको समाजको उदाहरणीय व्यक्ति हो । उसको व्यवहार र आचरणबाट अन्य व्यक्तिहरुले सिक्छन् । सिंगो समाज प्रेरित हुन्छ । तर यी नै नायक भनिएका शाहबाट समाजले के प्रेरणा लिने ? व्यक्तिहरुले के सिक्ने ? संस्कारी समाजमा शाहलाई कसरी चिनाउने ? शाह हाम्रो समाजका लायक छन्, प्रेरणाका श्रोत हुन् भनेर हामीले चिनाउने ठाउँ कहाँ छ ?
हाल सार्वजनिक भएको उनको आवाज समावेश अडियो पुरै सुनिसक्दा लाग्छ उनी नायकको नाममा खलनायक हुन् । कलाकारिता क्षेत्र उनको लागि नारी अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने माध्यम हो । जुनसुकै उमेरका नारीहरु उनको कथित प्रेमको नाममा हवसको शिकार बन्न जन्मिएका हुन् । नारी उनको लागि खेलौना हुन् । नारीहरुमा भावना, चाहना र सपना केही पनि हुँदैन । उनीहरुको त्यसपछिको जीवनको संबेदनशिलता केही पनि होइन । वास, उनीहरुको हुने भनेको एउटा शरीर हो । पायो कि त खेलि हाल्नु पर्छ ।
समिक्षासँगको प्रकरण धेरै अघिदेखि चर्चामा रहेको भएता पनि पलले सामसुम पार्दै आएका थिए । उनको बचाउमा सिन्डिकेट लगाइएका मनोरञ्जन क्षेत्रको ठेक्का लिएका केही युट्युव र सञ्चार संस्थाले सकेसम्म यो प्रकरणलाई बाहिर आउन दिएका थिएनन् । सबै कुरा थाहा पाएर पनि उनीहरुले शाहलाई जोगाइ रहेका थिए । तर सत्यको अनुहारमा लगाइएको मुकुण्डो सँधै रहिरदैन भने झैं उनीहरुले यो प्रकरणलाई लुकाइ राख्न सकेनन् ।
घरमै गएर अभिभावकसँग समिक्षाको उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने बाचा गरेका शाहले उनलाई पन्छाउन हरेक उपाय अपनाए पनि त्यो अब त्यति सजिलो पनि देखिदैन । समिक्षाले पटक–पटक कानूनी उपचार खोजे पनि शाहले फकाउने, आस्वासन दिने, धम्क्याउने हरेक गरेर रोकेका थिए । समिक्षाले सत्य कुरा बाहिर ल्याउन सञ्चार संस्थाको साथ खोजेपनि शाहले रोकेका थिए । तर जब कविता राय भन्ने अर्की युवती शाहको जीवनमा आइन्, शाहको अधिकांश समय ती नै रायसँग बित्न थाल्यो, म्युजिक भिडियोका निर्माता तथा निर्देशकहरुलाई आफूले खेल्ने म्युजिक भिडियोमा जोडीको रुपमा रायलाई नराखे नखेल्ने भन्दै जबरजस्ती राख्न लगाउन थाले लगायतको शाहका हर्कतले सिमा नाघेपछि भने समिक्षालाई असहैय भएको बताइन्छ ।
शाह र रायको सम्बन्धका बारेमा चर्चा चल्न थालेपछि र कति पटक त शाह रायकै कोठामा बसेको थाहा पाएपछि समिक्षाले रायलाई त्यस बारेमा सोधेकी थिइन् । त्यतिबेला राय र समिक्षाको हात हालाहाल नै भएको थियो । रायको कुटाइबाट अनुहारभरि निलडाम र चोट भएपछि उक्त बेलाको भिडियो समेत खिचेर समिक्षाले राखेको सुनिएको छ । थाहा भए अनुसार रायको कुटाइ पछि समिक्षाका दुवै आँखाको बाहिरी भाग पुरै कालो भएको छ ।
समिक्षा र रायको लुछालुछ र हानाहान भएपछि उनले पुन कानूनी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् । त्यतिबेला भने समिक्षालाई रोक्न पललाई हम्मे–हम्मे भएको थियो । समिक्षालाई आफैंले रोक्न नसकेपछि दुर्गेश थापा लगायतका केही कलाकार र युट्युबरहरुको मध्यस्थतामा उनलाई फकाईएको थियो । मध्यस्थकर्ताको पहलमा त्यतिबेला पलले समिक्षासँग गरेको कुराकानी बाहिरिएपछि सबै कुरा खुल्न थालेको हो ।
सार्वजनिक भएको अडियोमा प्रयोग गरेका प्रमुख बाक्यहरु यस्ता छन् :
शाह–समझदारीमा भएको हो मलाई थाहा थिएन । उनी मसङ गहिरो प्रेममा रैछन्
मध्यस्थकर्ता– समिक्षा तिम्रो इछ्या के छ ?
समिक्षा – बिहे नै अन्तिम
शाह – बिहे गरेर खुसी हुन्छौ ? तिम्लाइ थाहा छ सबै उता पनि समस्या … लाई कसरी सम्झाउने ?
अनौठो त के भने असल स्वभाव देखाउन जान्नु त कलाकारमा हुनै पर्ने गुण हो । नाटक नै भएपनि तर नारीको अस्मितालाई हल्का लिने एक चरित्रहिन व्यक्तिलाई कसरी नायक मान्ने ?
अन्य देशमा न्याय–कानून सबैको लागि बराबर हुन्छ । यहाँ खै के कुराले रोकिन्छ कानूनी प्रक्रिया बुझ्नै गाह्रो । एक नाबालिग मनमाथि आफ्नो स्टार्डमलाई हतियार बनाएर शोषण गर्नेलाई कानूनी उपचार के हो ? भनेर सोध्ने कस्ले अनि जवाफ दिने कस्ले अन्य मुलुकको कानूनको आँखामा पट्टि होस् नहोस् हाम्रो देशको कानूनको आँखामा खुल्दै नखुल्ने पट्टि छ । जसले पिडीतलाई थप पिडा दिन्छ अनि पिडकलाई थप हौसला ।
समिक्षाले पटक–पटक कानूनी उपचारको प्रयास गरे पनि उनलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न हरेक उपाय अपनाइएको पाइएको छ । समिक्षाले एक पटक कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिन गएको भएता पनि त्यहाँको प्रहरीले जाहेरी दिन तनहुँ जिल्ला प्रहरीमा जान भनेको तर त्यसबीचमा पल र उनका साथीहरुले रोकेको जानकारीमा आएको छ ।
उनीहरुको बारेमा समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि दुवैजनाले फेसबुक मार्फत आफूहरुको त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएको बताएका थिए भने केही युट्युबहरुमा समेत अन्तरवार्ता दिएका थिए । तर पछि समिक्षाले पहिले स्पष्टीकरण दिएको कुरालाई नै स्कृन सटमा शेयर गर्दै त्यो बेलाको स्टाटस कसैको अनुनयमा लेखिएको भन्दै सत्य कुरा केही दिनमा बाहिर ल्याउने भनेकी थिईन । त्यस लगत्तै शाह केही युट्युबरसहित पोखरामा गएर एक होटलमा रातभरि वार्ता गरेको सुनिएको थियो ।
यसरी सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समेत सार्वजनिक भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी नपरे पनि यो प्रकरण कानूनी हिसाबले दण्डनीय रहेको बताउँछन् अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल । यो प्रकरण समाज विरुद्धको अपराध भएकोले यति धेरै चर्चा भइसकेपछि प्रहरी आफैंले प्रतिवेदन बनाएर पक्राउ गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सहमतिमै सम्बन्ध भएता पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँगको सम्बन्धलाई कानूनले बन्देज गरेकोले यो प्रकरणलाई व्यवहारिक रुपमा हेर्नु नहुने भनाई अधिवक्ता पौडेलको रहेको छ । ‘यो प्रकरण समाज र राज्य विरुद्धको समेत अपराध भएकोले यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही नगर्दा समाजमा यस्तो अपराध कर्म बढ्ने एवम् समाजका दिदी बहिनीहरु सुरक्षित हुँदैनन् । प्रहरीले गम्भीर रुपमा लिएर प्रतिबेदन बनाएर अभियोग लगाउदा राम्रो हुन्छ ।’- अधिवक्ता पौडेलले न्युज हाउस नेपालसँग भने । शाह एक सार्वजनिक मान्छे भएकोले अरु सर्वसाधारणभन्दा शाहमाथि अरु थप सजाय हुनसक्ने समेत उनले बताए ।
समिक्षा मात्र छैनन् शाहबाट पिडीत
त्यसो त झुटो पिरतीको जाल बुनेर शाहले समिक्षालाई मात्र फसाएका भने होइनन् । उनले आधा दर्जन भन्दा बढी युवतीहरुसँग समानान्तर सम्बन्ध बनाएको फेला परेको छ । हुन त कुनैबेला शाहको नाम नायिका आँचल शर्मासँग पनि जोडिएको थियो । उनीहरुबीच विवाह नै हुने गसिपहरु पनि बनेका थिए । साँच्चीकै होला भनेर सोचेका दर्शकहरु त्यतिबेला जिल परे, जब आँचलले उदिप श्रेष्ठ नामक युवासँग विवाह गरिन् ।
आँचलपछि शाहको सम्बन्ध अंकिता गुरुङसँग जोडिएको थियो । अंकिताले शाहलाई आफ्नो परिवारसँग भेटाएर विवाह गर्ने पक्का भएपछि पढाइका लागि बिदेश गएकी थिइन् । अंकिता बिदेश गएपछि स्वतन्त्रता महसुस गरेका पल त्यसपछिअर्की एक युवतीसँग नजिकिएका थिए । ती युवतीलाई पनि धोका दिएर पछि समिक्षासँग जोडिए विकासशिल उमेर र मानसिकताको फाइदा उठाएर नै शाहले समिक्षालाई मायाजालमा पार्न सफल भएका थिए । शाह अंकिताकोमा झैं समिक्षाकोमा समेत गएर विवाह गर्ने बाचा गरेका थिए ।
आफूले विवाह गर्ने आस्वासन दिएकी समिक्षालाई व्यवास्ता गरेका शाह पछि कबिता रायसँग जोडिन पुगेका थिए भने अरु युवतीहरु पनि शाहबाट पि’डी’त भएको भन्दै खुल्न थालेको बताइएको छ ।
सञ्चार माध्यमकै आवरणमा चर्चामा आएका एक व्यक्तिले रियल हिरो को उपाधिले विभूषित गरेका नायकको खलनायकी चरित्रको असली चित्र कसले देखाइदेला ? अनि जानेर या नजानेर एउटा कथित सुरस्टारको झुटो माया जालमा फस्दै आफ्नो विलक्षण प्रतिभालाई बन्धक उन्मुख बनाएर भविष्यलाई अन्धकार तर्फ मोडि रहेकी एक किशोरीको भविष्य के होला ?
समाचार तयार गर्दै गर्दा पनि सोच्न बाध्य थियौं हामी । समाचार तयार त गर्यौं, यसलाई प्रकाशन गरेपछि कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो ? तेरो अनलाइन बन्द गराइदिउँ ? भन्ने हो या यती दिन्छु त्यो समाचार हटाइदिन भन्ने हो ।
जे होस् यती पक्का छ जब सम्म तपाईं हामी सर्वसाधारणले कसैलाई पनि उसले पाउनु पर्ने भन्दा माथीको सम्मान दिन्छौं, तब उनीहरुलाई घमण्डले छुन्छ अनि मपाईत्वको अहमताले देवत्वको रुप लिन्छ । अनि त्यस सँगै सुरु हुन्छ बिनाश ।
अन्धभक्त फ्यानहरु, बिदेशमा खाइ नखाइ आफ्नो छाक कटाई सहयोग दान गर्ने मनै देखि सम्मानित मनहरुले जुन दिन बुझ्छन् कि मेरो मेहनत को कमाई, विश्वास अरु कसैले देखाएर खाने भाडो भएको छ, समाजमा कुरिती कुसंस्कारको लागि प्रमुख कारक त्यही व्यक्ति भएको छ भने अनि त्यस दिन फुस्रो स्टार्डम, बिरंगी इन्द्रेणी र स्वार्थी फाउन्डेसनहरुको पसल पुर्ण रूपमा बन्द हुनेछ । – न्युज हाउस नेपाल
२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 311 Views